Maze lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
mirenireny eny an-dalamben'i tanàna iray tsy mahazatra, dia mora ny mahazo very, very. Dia Mitovy Misafotofoto, ny Output ny izay tapaka Mangozohozo izy. Raha tianao ny hahafantatra ny fomba hamakivaky amin'ny habakabaka sy ny mampitombo zavatra manindry mandry, ilaina maimaim-poana amin'ny Internet ianao lalao Labyrinths. Afaka milalao ho toy ny mahery fo ny sariitatra na hitantana zavatra sasany, Smiley, pakmenom. Teny an-dalana, dia ilaina ny hanatanteraka ny fepetram-kilalao – Manangona zavatra, nandositra avy amin'ny biby goavam-be. Raha izany no Kely Red Riding Hood, mihaza azy fotsy volchische Jack fody? Mikatsaka ny hahita piraty harena sarobidy, sy ny mpanamory sambon-danitra mitady ny lalana ho any an-vahindanitra.
Whack ny Craft
Sven ny Fitadiavana
Ilay sakaizako mpiambina izay
Lot A Sir Vola madinika 1
Kogama: The Adventure Underground
Ny Pacs Lehibe Lehibe Indrindra
Hotel Transylvania 3 Crusades Cruise Ship
Frantsa volamena FRVR
Ny mpihaza mineraly
Velively mampitolagaga !!!
Fandosirana ny gadra
Maze sy mpizaha tany
Lalao Maze tamin'ny Category:
Farany Maze lalao
Puzzle Maze loko
Zombie Maze 3D tsotra
Fanenjehana Maze eran-tany
Voafandrika ao anatiny
Lalao Online Rehetra Maze lalao an-tserasera
toy izany samihafa mazes – mampidi-doza sy ny fialam-boly
Games mazes – Ity lalao ity, izay tsy maintsy mahita fomba avy amin'ny lalantsara Feno tahotra na ny faritra ny kalalahana. Rafitra toy izany dia fantatra hatramin'ny taloha, ary efa be mpitia tany Gresy sy Roma. Dia nanompo fa hikorontana ny olona, ​​ka tsy hamela azy handao ny faritra. Nanokan-tena ihany no afaka tsy nahita ny fomba fanafahana avy amin'izany fandrika. Ihany koa izy ireo nanompo ho toy ny karazana fitsapana, sy ny olona rehetra mahalala ny angano ny Cretan labyrinth izay ny Minotaur niaina – poluchelovek, polubyk. Indraindray, koa, lapa sy ny tobiny naorina mba ny intertwining efitrano, lalantsara, niches sy andinin-tsoratra masina miafina mampahatsiahy Misafotofoto. Fa ao an-tranobe any amin'ny Moyen Âge, ireny dia nanome ny tari-dalana ho an'ny voly ny voly ny vahiny. Tao amin'ny saha kirihitra no nambolena ka ny lalana eo amin'izy ireo ny fotoana rehetra nihodina izy ka nesorina amin'ny lalana tsy fantatra, ary ny maitso toerana tena teo ambonin'ny lohan'ilay lehilahy, fa tsy mamela azy mba hijery ka hamakivaky eny amin'ny habakabaka. Raha mamela toerana, labyrinths sinuous bebe kokoa, miaraka amin'ny lalantsara maro. Fa ny ankamaroan'izy ireo dia kely ary hamela mora andalan-teny ny minitra vitsivitsy. Ho azy, mba very nandritra ny fotoana ela tamin'ny lalana ireo dia tsy hainy izany; fa izany rehetra izany niankina tamin'ny olona iray mahay hamakivaky eny amin'ny habakabaka.
A andianà virtoaly mazes
Maro ny kilalao zatra ny hevitra ny labyrinth fanampiny andalan-teny ny asa, fa ny tena mpivavaka tari-dalana fahafaham-po ny fitiavana ny lojika-tsaina, milalao ao amin'ny dikan-mitsangana-irery.
Lalao mazes natao tamin'ny karazan-kira hafa.
Misy telo-amin'ny lafiny voasokitra ao koa;
Embodiments ny firobohana lalina ao amin'ny lalantsara ny mpilalao, rehefa mahita afa-tsy ny faritra ao anatin'ny labyrinth,
toy izany saha izay nandinika hatrany ambony, ka mora kokoa.
Jereo tsara tarehy mazes izay ny mpilalao raha nanidina ny lalantsara ny ranon-dra. Dia milalao amin'ny loko samy hafa, nitatra ny tampoka narrowed indray, hatrany nampoizina ahodiny sy nifandimby, ary ny hafainganam-pandeha azo ahitsy tsy miankina, zipping azy ao toy ny Vahindanitra Mivolondronono. Eritrereto Bomberman lalao – izany ihany koa Variant ny Misafotofoto ny toe-javatra nisy Manimba ny manda. Ny toetra amam-panahy tokony halefa amin'ny alalan'ny ny lalantsara, ho afa-mandositra ny biby goavam-be, hanangona ny tombony zavatra mba nitsoka ny rindrina, ary hahita andinin-teny vaovao. Miorina amin'ny hevitra ity, dia namorona be dia be ny dikan-samy hafa, ary mety hijery ny labyrinth toy ny fefy ny kirihitra, fefy-paling sy safidy hafa. Hafa karazana labyrinth – fotoana mba hitady fomba avy amin'ny mikatona toerana fa tsy latsaka ao amin'ny fandrika. Ny toe-javatra manodidina dia saika mitovy foana, ary mahatsapa ianao tonga any na tsia, dia tena sarotra. Indraindray isika dia tsy maintsy hanasiana faribolana ao amin'ny toerana iray imbetsaka, amin'ny fotoana rehetra, niverina ho any amin'ny fiaingana. Ny manaraka ny lalao dikan-Misafotofoto – Ady Tanchico. Niely teny an-ady isan-karazany eo amin'ny fiara sakana fitaovana, azo atao tsy mba hamely tampoka ny fahavalo, ary nanafina haingana raha misy ny fanafihana. Ary ny fahafahana bebe kokoa ho ny hetsika, indrindra fa mampifaly.
toy izany mahafinaritra tia dia ho afaka ny hitady fomba tafaraka indray amin'ny havan-tiany, mba hanampy ny tantely mba hanangona vovobony, ny totozy dia hahatonga ny lalana ho any an-fromazy davaka; ary ny vitsika fihetsehan'ny nanaraka ny lalantsara ny lehibe tanàna ambanin'ny tany. City eny an-dalambe ihany koa indraindray ka sahiran-tsaina fa mitovy ny interweaving lalantsara ny labyrinth, ary mba ho afa-mandositra ny Titanic, ary dia ilaina ny hamakivaky ny tonga ny famonjena alohan'ny goavam-be sambo dia rendrika.